UMTHANDAZO ESAN MARTÍN CABALLERO YOSHISHINO LWAKHO
Iposi yangoku Umthandazo kuSanta Martin Knight, umfundi unethuba lokwazi eyona mithandazo isebenzayo ekufuneka iphakanyiselwe umqeshi wabarhwebi kunye namashishini.
1 Umthandazo kuSanta Martin Knight
1.1 Umthandazo kuSan Martín Caballero malunga nethamsanqa leshishini
1.2 Umthandazo wokuzisa ithamsanqa kwishishini
1.3 Umthandazo wokutsala abathengi
ISan Martín Caballero, yabizwa njengamaKatolika njengomphathi wabarhwebi kunye nabakhuseli bamashishini.
Abanyanisekileyo abaninzi baphakamisa imithandazo yabo ngemithandazo ekhethekileyo ebhekiswe kule ngcwele ingcwele, ngenjongo yokukhusela iivenkile zabo kunye namashishini abo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngaphambili xa sasithandaza eSan Martín Caballero, kufuneka sicele imvume kuThixo wasezulwini, uBawo wethu onothando, ukuba asinike uncedo oluyimfuneko ngokuthethelelwa kwale ngcwele, kwaye ishishini lethu liyaphumelela kwaye likhuselwe kuyo yonke into Ingozi.
Le mithandazo kufuneka ibhengezwe kwaye iphakanyiswe ngokholo olupheleleyo kunye nokukhumbula kwiingcinga zethu ukuze sifumane iziphumo ezilungileyo.
Umthandazo kuSan Martín Caballero malunga nethamsanqa leshishini
"Idumileyo iSan Martín Caballero".
"Owu, San Martín de Tours, wabizwa uMartín de Loba!"
"Utata obusisiweyo wekamva."
"Ndinike umnikelo ongcwele."
"Njengokuba uThixo wayinika amahlwempu."
"Yenza, bawo, ukuba nayiphi na into endiyenzayo."
"Mayithengiswe kwaye ithengiwe, ndinike, bawo, ubutyebi kunye nentlalontle ukuphucula uphatho lwam."
"Musa ukundiyeka ndiqhekeze okanye ndichithe ishishini."
"Hayi kuyo nayiphi na imisebenzi yam, ndinike ithamsanqa kwaye ndiphinde into yonke endiyityalayo, ndinike ukuchuma, ndinike ithamsanqa, ndinike uncedo lwakho oluhle (ukwenza isicelo osifunayo)."
"Ndiziseleni abantu abaza kuthenga kwaye bandincede. Ngamana yonke into endiyenzayo okanye endiyenzayo inokuba nesiphelo esihle, izinto zam zinokubaluleka, makubekho igolide nesilivere endlwini yam, ndithumela uYesu kuMariya nakubhishophu INgcwele uJoseph ".
“Divine San Martín Caballero, ndithambise ngamafutha akho okuthambisa, ndithambise ngeegrisi zakho, ungandivumeli ukuba ndihambe ndingenazo izifungo ezingcwele kwaye njengokuba usinike isipho kwelaxhego, ulithumele kwangoko namhlanje, ndinike ihashe lakho ukuba lenze umsebenzi wam, ndinike ikrele lokulawula imiqobo, ndiboleke ingubo yakho yokundigquma ”.
“Makabongwe aphakanyiswe umthendeleko weCalvary kunye noMnqamlezo apho iNkosi yethu uYesu Krestu yaqaqanjelwa khona. Amen ".
Umthandazo kufuneka ugqitywe ngooBawo Bethu abathathu, bathuthu ooMariya abathathu kunye noZuko abathathu. Iphindwa kabini kwiintsuku ezintathu eziqhubekayo.
Ukuba ufumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: INovena eya eSanta Rita yamatyala aphelelwe lithemba.
Umthandazo wokuzisa ithamsanqa kwishishini
"UOwuNgcwele oyiNgcwele uMartin Knight!, Kunye nokukhanya kwakho okungcwele, undinika ubungangamsha obuzele ngamathamsanqa, khokela amanyathelo am ekukhuleni kweshishini lam, ukuba likhokelela kwicala lenkqubela phambili ”.
“Sikelela iziqhamo zeshishini lam, ngamana inkampani yam ingahlala inemveliso kwaye ichuma, ingathi ithamsanqa libe sisivuno sam sokuzukisa iNkosi yethu kunye neSan Martín Caballero. ndinike amandla Kuyimfuneko ukuba unganikezeli ngexesha elinzima, nokuba baninzi ”.
"Ndiyabulela kwangaphambili, ngokundinika umsebenzi ofanelekileyo nokwenza ukuba abathengi bam bakhule."
"Ndiyathemba kuwe nasemandleni akho amakhulu, ukuvuna ithamsanqa kwishishini lam, Amen, makube njalo!"
Umthandazo wokutsala abathengi
"Egameni loThixo wasezulwini, ndicela imvume yokuthetha no-Saint Martin Caballero ngomthandazo ongagungqiyo, kwaye ndimcele ngokunyanisekileyo ukuba abe kukukhanya nesikhokelo sobomi bam nakwizenzo zam, enze ukuba ishishini lam liphumelele kwaye lizele ithamsanqa."
"Ndiyakucela ongcwele olungileyo ukuba uthathe iintambo zeshishini lam, ngeendlela zethamsanqa kunye nentabalala."
"Ndikutyala zonke izinto ezilungileyo ezikwishishini lam, enkosi ngokhuseleko lwakho olungcwele, yiyo le nto inika abathengi bethu ukuzithemba kwaye ibatsala ngamanani amakhulu."
"Ndinike ubulumko obufanelekileyo ukuze ndikwazi ukwenza ezona thethwano zifanelekileyo, kwaye ukuze impumelelo kunye neentsikelelo, kwaye zande."
"Ngenelela phambi kweNkosi yethu, ukuze ibe yintando yakhe hayi eyam, eyobe ikamva lenkampani yam."
"Kuwe, San Martín Caballero, ndiyakucela ukuba usikelele iziqhamo zeshishini lam kwaye nokuchuma kwalo kubandakanya nabathengi bethu, ukuze baninzi ngakumbi bonwabele ukuthengisa kwethu yonke imihla."
"Enkosi ngokutsala abathengi, kwaye loo nto ingaguqulela kwithamsanqa ngakumbi kunye nokukhula." "Amen!".